ငါသာလျှင် ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အရှင်သခင်: 2010/02
ဗိုလ်မှူးကြီး တင်မိုး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းနိုင်ဦး တို့လည်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ထဲ ရောက်နေပါပေါ့လား။၂၀၀၉ မတ်လတုန်းက တရုတ်ပြည်က ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ။
AP Photo 11 months ago
Myanmar Colonel Than Naing Oo, right, with his colleague Colonel Tin Moe take pictures before the start of the China-ASEAN Dialogue between Senior Defense Scholars in Beijing, China, Monday, March 30, 2009. China this week is hosting talks with high-ranking military officers from the ten countries that make up the Association of Southeast Asian Nations as part of efforts to boost cooperation and head-off clashes over rival claims to disputed island chains in the South China Sea. Speaking at Monday's opening ceremony,aChinese general warned that the global financial crisis could aggravate such disputes by increasing competition for resources.
မလေးရှားက ဗိုလ်မှူးကြီး Ranjit S. Ramday နဲ့ ဘာတွေ ပြောနေပါလိမ့်။ ပြုံးတော့ ပြုံးနေတာပဲ။ (ကျနော့်လိုပဲ ထင်ပါရဲ့၊ ကျနော်လည်း တပါးသူပြောတာ နားမလည်ရင် ပြုံးပြလိုက်တယ်း)
ဒီပုံလည်း ကျနော့်စတိုင်ကို ယူထားတာပဲ။ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေက ခါးပတ်ခေါင်းနဲ့ တည့်တည့် ဖြစ်မနေဘူး။ လူဖြစ်ရတာ မလွယ်ဘူးဗျာ။ အမျိုးသမီးတွေ ဆိုရင်လည်း စကပ် ၀တ်ရတော့ ထိုင်တဲ့အခါ ဒူးကို ညောင်းနေအောင် စေ့ထားရမယ်။ အမျိုးသားတွေကျတော့လည်း ဘောင်းဘီဝတ်ရတော့ ဟန်ကျတယ် ဆိုပေမယ့် တခါတလေ ဇစ်ဆွဲမတင်မိတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ရှုံ့ကြိုးတပ် ဘောင်းဘီတွေ ခေတ်စားလာရင်တော့ ကောင်းမယ်။ အဲဒီလို အားကစား ဘောင်းဘီတွေဟာ လူကြီးလူကောင်း ၀တ်စုံ (၀ါ) ပွဲတက်ဝတ်စုံ ဖြစ်သင့်တယ်။ ရှေးလူကြီးများ တယ်ညံ့သကိုး။ အလှကြိုက်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒီလိုဘောင်းဘီတွေဟာ ဇစ်ဆွဲတင်ရတာနဲ့၊ ကြယ်သီးတို့ ဘာတို့ တပ်ရတာနဲ့၊ ခါးပတ်လည်း ပတ်ရသေးတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ရင် အင်္ကျီကို အပြင်ထုတ်ဝတ်တယ်။ တခါတလေ မေ့ပြီး ဇစ်ဆွဲမတင်မိတာ လူတွေမြင်ရင် ဟားကြမှာ စိုးလို့ ။
နေစမ်းဘာဦး၊ ဒီပို့စ်က ဘာအကြောင်း ရေးထားတာလဲ လို့ မေးလာရင် အင်း - ဘယ်လို ဖြေရပါ့။ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့လို့ ဖြေရမယ် ထင်တယ်။ ပြန်ဖတ်မနေပါနဲ့ဗျာ။ လျှောက်ရေးထားတာပါ။ စကားမစပ် - ကိုယ်ရေးလိုက်တာတွေဟာ အယ်ဒီတာ့စားပွဲ၊ သားသတ်သမားစားပွဲကို မဖြတ်ဘဲ အင်တာနက်ပေါ် ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ သိပ်ကျေနပ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ကျေနပ်စရာပါ။ ကျေနပ်ချင်လို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးတယ် ဆိုပါစို့ရဲ့။
Cambodian and Burmese language
ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ မြန်မာစာ ဘာဆိုင်လို့လဲ
အင်း - ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး ဆိုပါတော့။ နို့ပေမယ့် ရေးစရာ အကြောင်းအရာ ၂ ခု ဒီနေ့ နေ့လယ်မှာ ရေးလိုက်ချင်တာနဲ့ ပို့စ် တခုတည်းမှာ ပေါင်းထည့်လိုက်လို့ ဆိုင်သလို ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီလို - ဒီလို
အပေါ်က သတင်းမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘောဒီးယားတွေ ရန်ကုန် ဘုရားဖူး သိပ်လာတယ် ဆိုပဲ။ ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ တလတည်းမှာတင် သောင်းနဲ့ချီပြီး ရှိတယ်လို့ သတင်းက ဆိုတယ်။ ဘယ်နေ့ထုတ် ဘယ်ဂျာနယ်ထဲက ယူထားသလဲတော့ မမေးနဲ့။ ကျနော် တကယ် မမှတ်သားမိလိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း စည်းကမ်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီ လိုအပ်တာ ထင်ပါရဲ့း)
ဒီလိုပါပဲ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေ ကွန်ပြူတာထဲ လျှောက်ထည့်ထားတာ သိပ်များတယ်။ စောစောက တခုခု ရှာရင်းနဲ့ ဒါလေး ၂ ခု အမှတ်တမဲ့ တွေ့တာနဲ့ တင်လိုက်ဦးမှ ဆိုပြီး တင်လိုက်တာပါ။ အနာဂတ်မှာတော့ စည်းကမ်းရှိရှိ သိမ်းဆည်းဦးမှ။ ဒါမှမဟုတ် တင်စရာရှိတာ ကိုယ့်ဘလော့မှာ ချက်ချင်းတင်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်။ ဒါဆို အကြွေး မတင်တော့ဘူး။
လောလောဆယ်တော့ အိမ်မှာ အင်တာနက် တလ ပျက်မယ်။ အင်တာနက်နှေးလို့ ကုမ္ပဏီ အသစ်ပြောင်းတာ မှားသွားတယ်။ ပြောင်းကာမှ အင်တာနက်က လေးရက် ပျက်လိုက်၊ ငါးရက် ပျက်လိုက်နဲ့။ ခုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ တလလုံး မလာပါဘူး တဲ့ ခင်ဗျား( ကုမ္ပဏီ နာမည်က 3BB ဆိုလား ဘာဆိုလား။ စိတ်ညစ်တာနဲ့ နာမည်တောင် မေ့သွားပြီ။
လိုရင်း ပြန်ကောက်ရရင် ကမ္ဘောဒီးယားတွေ ရွှေတိဂုံသွားတာ တလတည်းမှာတင် သောင်းနဲ့ချီပြီး ရှိတယ်တဲ့။ သိပ်များတဲ့ ပမာဏနော်။ မြန်မာဘုရားဖူးတွေရော ကမ္ဘောဒီးယားက အန်ကောဝပ်တို့ ဘာတို့ကို ဘယ်နှစ်ယောက် သွားကြပါလိမ့်။ သိချင်လိုက်တာ။
တန်ခိုးကြီးတာ တန်ခိုးသေးတာက ထားပါတော့၊ ကျနော်ကတော့ ခရီးစရိတ် ဖြုန်းနိုင်မှုကို နည်းနည်း တွေးကြည့်တာပါ။ ကမ္ဘောဒီးယားတွေ ကံကောင်းတယ် ဆိုရမှာပဲ။ ခရီးသွားနိုင်လို့။
နောက်ထပ် ရှယ်ချင်တဲ့ အပိုင်းအစ တခုကတော့ မြန်မာစာ သမားတွေ ဂုဏ်တင့်တဲ့ အကြောင်းဗျာ။ ဟောသမှာ ဖတ်ပါဦး)
ကဲ - အဲဒါပါပဲ။
စာအညံ့ဆုံးသူတွေ တက္ကသိုလ် တက်ရင် မြန်မာစာတို့ ဘာတို့ပဲ ရကြရှာတယ်ဆိုတော့ မြန်မာစာက မြန်မာပြည်မှာ ဂုဏ်ငယ်နေတာ ကြာပေါ့လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပါပဲ ပြောချင်တာကတော့း)
Photos in Lana Resort, Chiang Mai
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ချင်းမိုင်မြို့ပြင်က Lana Resort ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။
ဒါက Lana အပြင်ဘက်က ကားလမ်းမ မြင်ကွင်း)
အချိန်ပိုလို့ကျန်းမာရေးလိုက်စား စက်ဘီးနင်းနေသူလည်း တွေ့တယ်။
တရုတ်စကားပန်းပင်ဗျ။ အရွက်လည်း မရှိ အပွင့်လည်း နတ္ထိ။ ဒါလည်း လှတာပဲ။
Lana Resort အ၀င်လမ်း။
အဲဒီလမ်းဘေးက မြင်ကွင်းတခု။ သစ်ပင် ပင်စည်က ကာလာဖူး ဖြစ်နေလို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာ။ ယူကလစ်ပင် ဆိုပဲ။
ရိုးရာ ရေအိုးစင်။ ဖော်ရှိုးပေါ့ဗျာ။ ရေဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ ကလေးတွေ လာဆော့လွန်းလို့ ရေမထည့်တာဆိုပြီး ဆိုင်က ဆင်ခြေပေးတယ်လို့ မိတ်ဆွေတယောက်က ပြောပြတယ်။
ဒါက ၀ါးဒီးဖွင့်တဲ့နေရာ။ ညဘက်ဆိုရင်တော့ သောက်ဒီးလည်း ပါတယ်။ ဆိုင်အရက်က ဈေးကြီးတော့ မြို့ထဲကနေ ၀ယ်လာကြတယ်း)
အပြင်ဘက်က ပျိုးပင် ပန်းပင် စသဖြင့် အရောင်းဆိုင်။ ၀ိတ်လျှော့နေတာခင်ဗျ။
ဟေ့လူကြီး ကျုပ်ဝိတ်လျှော့တဲ့ပုံကို ဘလော့ပေါ် မတင်နဲ့နော်။ အီးမေးနဲ့လည်း ဖြန့်မနေနဲ့။
လောရှည် - သြော် - မင်းကလည်း၊ ဒီလူကို ဒီလိုသွားပြောလို့ ရမလားကွ။
ဂျပု - ဒီလို မပြောလို့ ဘယ်လိုပြောရမှာလဲဟ ခွေးမသားရ။
လောရှည် - အင်း - ပြောမရရင်တော့ နောက်တခါတွေ့ရင် ခြေသလုံးသာ ပြေးကိုက်ပေတော့။ ဒီကောင်တွေ ဒီနေရာမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲ မင်းသိလား။
ဂျပု - အလေ လာလိုက်တာ နေမှာပေါ့။ လူသတ္တ၀ါတွေက အလုပ်မရှိ လျှောက်သွားနေကြတာ မင်းလည်း သိသားပဲ။
လောရှည် - မင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ ငနဲကို ကြည့်ရတာတော့ ရည်ရည်မွန်မွန် သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ရိုးရိုးသားသား ရှိပုံရတယ်။
ဂျပု - အင်း ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ကြောင်တယ်။ သူတို့တည်းတဲ့ Lana ထဲမှာ ငါလျှောက်ပြေးနေတော့ အသေအချာ လိုက် ကြည့်နေတယ်။ ကျန်တဲ့ငနဲတွေကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ။
လောရှည် - ဟေ့ကောင်ဂျပု - - ၊ ဟိုငနဲ ငါတို့ကို လှမ်းရိုက်နေပြန်ပြီ။
ဂျပု - သွားဖြဲပြလိုက်ပေါ့ကွာ။
း) သူတို့စကားကို ဘာသာပြန်တတ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထင်ရာ လျှောက်ရေးလိုက်တာပါ။ တော်သေးပြီ။ နားဦးမည်။း)
rarely used burmse alphabet
ဎ - ဒါ့ရေမှုတ် ဆိုတဲ့ခလုတ် ကျနော့် ကီးဘုတ်မှာ မရှိဘူး။ အင်တာနက်ကနေ ကော်ပီကူးလိုက်ပါကြောင်း။
မြန်မာဗျည်းတွေထဲက ဒီ ဒါ့ရေမှုတ် ဎ ဆိုတဲ့ ဗျည်းက ဘယ်မှာ သုံးပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားနေတာ ကြာပြီ။ အဘိဓာန်တွေထဲမှာလည်း မတွေ့ပါဘူး။ ရှိရင်လည်း ၁၄ ခုမြောက်ဗျည်း ဆိုတာပဲ ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ဆို ဘာကြောင့် သူကောင့်သားကို ထည့်ထားပါလိမ့် ဖြုတ်လိုက်ပါလားလို့တောင် ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ ဖြုတ်တော့ မဖြုတ်ပါနဲ့။ အသုံးတော့ ကျမှာပါ။
လောလောဆယ် ဆိုင်ကယ်နံပါတ်မှာ အသုံးပြုတယ် ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ ဂျာနယ်တခုမှာ တွေ့လို့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
No comment, please
ဒီရက်ပိုင်း သတင်းစာတစောင်မှာ တွေ့ရတဲ့ ကြော်ငြာတွေဗျာ။ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းကို သည်းမခံပါ ဆိုတာတွေပေါ့။ မိသားစုအတွင်း ကွိုင်တက်ရာကနေ သတင်းစာပေါ် တက်လာကြတာ မဟုတ်လား။
အဖြစ်ကလည်း ဆိုးလိုက်တာ၊ သတင်းစာမှာ ပုံနှိပ်စာလုံးတွေ အများကြီး ရှိပါလျက်ကယ်နဲ့ ဒီလို ပေါက်ကရကြော်ငြာတွေမှ အရင်ဦးဆုံး ဖတ်နေရတယ်။ မျက်နှာဖုံးမှာ ဦးစားပေးထားတာတွေက ပိုပြီး ပေါက်ကရဖြစ်နေတော့ ရွေးစရာ မရှိဘူး၊ သာရေးနာရေး ကွာရှင်းရေးတွေကိုပဲ အရင် ဖတ်ရပြီပေါ့။
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း သည်းခံပါ ဆိုတဲ့ စာတန်းလည်း အဲဒီ ကြော်ငြာတွေမှာ ပါတယ်။ ဘာမှ မမေးနဲ့ မပြောနဲ့ ပေါ့ဗျာ။ စပ်စုတတ်တဲ့ လူ့သဘာဝကို ဟန့်တားတဲ့ ကြော်ငြာတွေမို့ "စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်" ဆိုတဲ့ စာတန်းကို ဘယ်တွေ့ရပါ့မလဲး)
ပြတ်စဲကြောင်း မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း အော်ချက်ထုတ်တာတွေဟာ ရံဖန်ရံခါ အင် ဖြစ်နေတယ်တယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်တို့ လင်မယား ကွာရှင်းပြီဆိုပြီး မကြာခင်က သတင်းတွေမှာ ပါလာတယ်။ အများစု ယုံကြည်တာကတော့ မိသားစုရဲ့ မာဖီးယားစီးပွားရေးတွေ အသိမ်းခံရမှာစိုးလို့ သို့ကလို အော်ချက်ထုတ်တာ တဲ့။ ဆယ်ပြားစေ့သက်ဆင်က တရားခံပြေး မဟုတ်လား။ (သူ့နောက် လိုက်မနေဘဲ ဘန်ကောက်မှာ) ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက ပိုင်တဲ့ စီးပွားရေး ဆိုတော့ အသိမ်းခံရမှုကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရမယ် ဆိုတဲ့သဘော။
မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်း လိမ်ပြီး ကြော်ငြာတာ ကြုံဖူးတယ်။ ဆယ်ပြားစေ့သက်ဆင်လို ကလိမ်ကျတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို - ဒီလို - ကျနော့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံရေးသမား တယောက်က ရန်ကုန်မှာ နေတယ်။ လှုပ်ရှားတယ်။ နယ်မှာ ရှိတဲ့ သူ့မိသားစုက မသက်သာဘူး။ ကျက်သရေတုံးတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးများက သူ့မိသားစုကို မကြာမကြာ သွားကြပ်တယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ သားတော်မောင်ဆီက ဘာသံကြားလဲ ဘယ်တော့ ပြန်လာမယ် ထင်လဲ ဘာလုပ်နေလဲ ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ စသဖြင့် ဘ ၁၆ လုံးနဲ့ နှိပ်စက်တာကြောင့် မိသားစုက သတင်းစာကနေ ကြော်ငြာထည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လာမနှောင့်ယှက်နဲ့ ဆိုတဲ့ကြော်ငြာပေါ့။ အဲဒီလို စကားလုံး အတိအကျတော့ ဘယ်သုံးပါ့မလဲ၊ သားအဖြစ်မှ စွန့်လွတ်ခြင်း၊ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း သည်းခံပါ ဘာညာပေါ့။
ခွေးမသား ထောက်လှမ်းရေး (ခွေးတွေတော့ သိက္ခာကျပါပြီ ဒုက္ခပဲ) အဲဒီ ထောက်လှမ်းရေး လာတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီ သတင်းစာကြော်ငြာ ပြလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူကောင့်သား ထောက်လှမ်းရေးက ထပ်မံနှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုတော့ဘူး ဆိုပဲ။
အယုတ်တမာကောင်တွေကို မမြင်ချင်လို့ လိမ်ပြီးကြော်ငြာတာတွေ ဘယ်လောက်များမလဲ မသိပါဘူး။
သူတို့ရဲ့ ဖေဖေကြီး ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကလည်း သို့ကလို ကြော်ငြာဖူးတာပဲ၊ သားတော်မောင် ရဲနိုင်ဝင်းက လူမျိုးခြားနဲ့ သီးချိန်တန် သီးတဲ့အတွက် သားအဖြစ်က စွန့်လွတ်တယ်လို့ သတင်းစာကနေ အော်ချက်ထုတ်တယ်။ (အိမ်ပြန်ရောက်မှ အဲဒီပုံ ပြန်ရှာပြီး တင်ဦးမှပဲ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့ ကြော်ငြာ။)
တကယ် စွန့်လွတ်ပုံ မရပါဘူး။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို ဖမ်းတော့ မိသားစုဝင်အားလုံး အဖမ်းခံရချိန်မှာ ဦးရဲနိုင်ဝင်းလည်း သံတိုင်နောက် ရောက်တယ်လို့ မှတ်သားရဖူးတယ်။
ဘာတွေ ရေးထားတာလဲ မေးမနေနဲ့ဗျာ။ သတင်းစာဖတ်ပြီး စိတ်ကူးတခုရပြီး လျှောက်ရေးလိုက်တာပါ။ ကျနော် အခု ဆွေးနွေးပွဲ တခုကို ရောက်နေတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ၀ပ်ရှော့ လို့ ခေါ်တယ်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလို့ တချို့က ဘာသာပြန်တယ်။ ထိုင်နေရတာဟာ အလုပ်တခုလို့ ခင်ဗျား ယူဆရင် အဲဒီဘာသာပြန်ချက်ကို ကြိုက်မှာပါး)
၀ပ်ရှော့ဆိုတော့ ပျော်စရာ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ ကိုယ့်လူတို့ရယ်။ ၃ ရက် လုပ်မယ်။ နက်ဖန် ၁ ရက် ကျန်တယ်။ ၀ပ်ရှော့ထဲမှာ အတည်ပြောတာ ပေါက်ကရ ပြောတာတွေကို နားဒုက္ခခံရင်း လျှောက်ရေးရတဲ့ စာ ဆိုတော့ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါရဲ့။
အရသာရှိတဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်မှ အရသာရှိမယ် မဟုတ်လား။
ကျွဲရောင်းလာကြတဲ့ လူကြီးမင်းများ အရသာရှိစေဖို့ စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ဆိုပါရစေး)
မိတ်ဆွေများ မြင်ငတ်ဖြစ်နေရတာကတော့ Spicy fried noodles တဲ့။ ခေါက်ဆွဲပြား ခပ်ကြီးကြီးကို ပင်စိမ်းရွက်၊ အသားတမျိုးမျိုး၊ ငရုတ်သီး တို့နဲ့ ကြော်ထားတာ။ အောက်ခံအစိမ်းရောင်ကတော့ ဆလပ်ရွက်ကို ခင်းထားတာပါပဲ။ ခရမ်းကျွတ်သီးလည်း ပါတယ်။
ညာဘက်ထောင့်က ခွက်အဖြူ ၄ လုံးတွဲကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ခေါက်ဆွဲဆိုင်တကာ စားပွဲပေါ်တင်ထားတတ်တဲ့ ရှာလကာရည်၊ ငရုပ်သီးရည်၊ ငရုပ်သီးမှုန့်၊ သကြား တို့ကို ထည့်ထားတာပါ။ ကျနော်ကတော့ အဲဒါတွေ ထည့်မစားပါဘူး။ ခေါက်ဆွဲနာမည်ကိုက Spicy fried noodles ဆိုတော့ စပ်ပြီးသား မဟုတ်လား။
ကျနော့်ရှေ့က ကချင်ကြီးကလည်း ဒီခေါက်ဆွဲပဲ စားတာပါ။ (တကယ်တော့ သူမှာတဲ့ခေါက်ဆွဲမျိုး ကျနော် လိုက်မှာတာ။ ချက်တဲ့သူ သက်သာအောင်လို့။ ပြီးတော့ ဘာမှာရမှန်း မသိလို့။ ဗိုက်လည်း ဆာနေဘီ။) အဲဒီဆရာကတော့ ငရုပ်သီးမှုန့် ထပ်ထည့်သဗျ။ အစပ်တည့်ပုံရတယ်။ စပ်တဲ့အရသာနဲ့ တည့်ပုံရတယ်း)
နေရာကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ်ဆိုင်မြို့က စားသောက်ဆိုင်။ ချောင်းဘေးက ဆိုင်။ တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင် တံတားနဲ့ ကပ်လျက်ဆိုင်။
တာချီလိတ်ဟာ အဲဒီဆိုင်ကနေ ၀ါးတရိုက်ပဲ ဝေးတယ်။
တာချီလိတ်ဘက်ကမ်း တံတားဘေးမှာတော့ ကြော်ငြာဘုတ်တွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်။
အဲဒီဘုတ်တွေထဲက ရွှေပြည်နန်း ကြော်ငြာမှာ သနပ်ခါးနဲ့အမျိုးသမီးက ချစ်စရာ။
ချစ်စရာ ဆိုတာ သူ့နာမည် ဟုတ်ဟန် မတူပါဘူး။ ပါးကွက်နဲ့မို့ ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ ပြောတာပါ။ သူ့ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေသူက နေတိုး ဖြစ်မယ်။ မနာလိုစရာ ကောင်းလိုက်တား(
သနပ်ခါးကြော်ငြာနဲ့ အတူ တွေ့ရတာတခုက ဆပ်ပြာကြော်ငြာဗျ။ အဲသမှာ ရေးထားတာ ဇိမ်ခံဆပ်ပြာ ဆိုပါလား အရပ်ကတို့ရေ။ ဇိမ်ခံချင်သူတွေ ၀ယ်သုံးနိုင်ကြဖို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်း) ဇိမ်ခံကား၊ ဇိမ်ခံဟိုတယ်တို့ထက် ဇိမ်ခံဆပ်ပြာက အကုန်အကျ သက်သာမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဘာဇိမ်တွေ ထွက်လာမလဲတော့ မသိဘူး။ :D